प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको छटपटी | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको छटपटी
काठमाडौं, भदौ २८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको विषय फेरि उप्काए । उनले आज यो प्रसंग उठाउँदै सहमति नयाँ तरिकाले लागू गर्न पनि सकिने बताए ।
इलाम पुगेका प्रचण्डले कम्युनष्टि आन्दोलनका लागि आफूले त्याग गरेको बताए । आफूले धेरै प्रधानमन्त्री बनाइसकेको भन्दै विगतमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको सहमतिबारे नयाँ तरिकाले पनि जान सकिने बताए । ‘सहमतिबारे नयाँ तरिकाले जान पनि सकिन्छ,’ प्रचण्डले भने । आफूले चाहेको भए पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि त्याग गरेको जिकिर गरे ।
दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डले पार्टी एकीकरण गर्दा नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग आलोपाला आधा आधार अवधि सरकार चलाउने सहमति गरेको विषयको खुलासा गरिसकेका छन् । यो खुलासाले नेकपाभित्र र बाहिर तरंग आइरहँदा प्रचण्डले फेरि विगतको सहमतिमा नयाँ तरिकाले जान सकिने बताए । उनले पाँच वर्ष नेकपाको सरकार सशक्त ढंगले संचालन गर्न सहमतिबारे नयाँ ढंगले जान सकिने विषयलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
प्रचण्डलाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बन्ने छटपटी बढिरहेको छ । उनले जतिसुकै प्रधानमन्त्री बन्न आतुरता नदेखाएको भनेपनि विगतको सहमतिबारे बारम्बार खुलाउने गरेका छन् । आधा आधा सरकार संचालनमा नयाँ सहमति गरेर बढ्न सकिने अभिव्यक्तिलाई उनको प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोकै रुपमा लिन सकिन्छ ।
एमसीसी रोक्नु राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा : कृष्णबहादुर महरा !
फागुन ५, काठमाण्डौ । अदालतबाट सफाइ पाएपछि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराद्वाराले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विज्ञप्ति जारी
ओलीलाई निधिको जवाफ : कांग्रेस सरकार परीवर्तनको पक्षमा छैन्
काठमाडौं, ५ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले आफ्नो पार्टी अहिले
महरा प्रकरणः हिरासतमा जानुअघि देखि रिहाईसम्म
काठमाडौं, ५ मंसिर । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा १३३ दिन हिरासत बसाईंपछि रिहाई भएका छन्
कैलाश विकास बैंक लिमिटेड, वालिङ्ग शाखाले किर्ते गरेको भन्दै दिपेन्द्र कँडेल मिडियामा, घट्नामा संलग्न कसैलाई नछोड्ने चेतावनी
काठमाडौं, ५ फागुन । पब्लिक ईनोभेटर ईन्जिनियर दिपेन्द्र कँडेलले कैलाश विकास बैंक लिमिटेड, वालिङ्ग शाखाले
काठमाडौं, ५ फागनु । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बलात्कार प्रयासको मुद्दामा सफाइ
Breaking News: पूर्व सभामुख महरा निर्दोष ठहर
काठमाडौं, ५ फागुन । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ
रक्षामन्त्री पोखरेल किन पुगे कालापानी क्षेत्र ? कुटनीतिक वृत्तमा आलोचना
काठमाडौं, ५ फागुन । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सीमा निरीक्षणका क्रममा कालापानी क्षेत्र पुगेको
काठमाडौं, ५ फागुन । पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता देखि पूर्व राजासम्मको दिल्ली दौडले गति